Isingeniso kwikhosi yoyilo usebenzisa i-Ansys workbench-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Isingeniso kwikhosi yoyilo usebenzisa ibhendi yomsebenzi we-Ansys
Isikhokelo esisisiseko sokwenza into yokulinganisa ngaphakathi kwinkqubo yokuphononongwa kwezinto ezincinci.
Iinjineli ezingaphezulu nangaphezulu zisebenzisa iiModelers eziQinileyo kunye neendlela ezinobuncinci zokucombulula iingxaki zemihla ngemihla zoxinzelelo, ukusilela, ukuhambisa ubushushu, ukuphuma kwamanzi, umbane, phakathi kwabanye. Le khosi ihambisa ingqokelela yeeklasi ezijolise kulawulo olusisiseko lwe-ANSYS Workbench, yenye yezona nkqubo zigqibeleleyo nezandisiweyo zokulinganisa, iinkqubo zokulinganisa kunye neesolids.
Iiklasi zijongana nemicimbi yokudalwa kwejometri, uhlalutyo loxinzelelo, ukuhambisa ubushushu kunye neemowudi zentshukumo. Siza kuxoxa ngokuveliswa kwemessage esemgangathweni.
Inkqubela phambili yezifundo icwangcisiwe ukuba ilandele amanyathelo oyilo ngokulandelelana okulandelelana, ngoko ke sihloko ngasinye siya kusinceda sifikelele kuhlalutyo oluntsonkothileyo.
Ngelixa uxubusha ngezinto ezisisiseko, uya kufumana imizekelo esebenzayo onokuyisebenzisa kwikhompyuter yakho ukwandisa izakhono zakho. Ungahambela phambili ngesantya sakho, okanye uye nakwizihloko apho ufuna ukomeleza ulwazi.
I-ANSYS Workbench 15.0 iphuhlisiwe kwisakhelo esikuvumela ukuba wazise indlela entsha yokusebenza neeprojekthi zakho ngendlela yesikim. Apha uya kufunda ukusebenzisa ezi zixhobo, nokuba usebenze kunye nohlobo lwangaphambili okanye uyaqala.
Kwicandelo lokudalwa kwejometri siya kukukhokela kwinkqubo yokudala nokulungisa ijiyometri ukulungiselela uhlalutyo kuMatshini we-ANSYS, egubungela izihloko ezifana:
Ukudalwa kweejometri ze3D.
Ngenisa idatha evela kwezinye iimodyuli
Kula macandelo alandelayo siza kugxila kwimodyuli yokulinganisa yemishini. Apha uya kufunda ukusebenzisa le modyuli ngokuphumelelayo ukwakha imodeli yokulinganisa eyimodeli, uyihlalutye kwaye utolike iziphumo, ugubungela izihloko ezifana:
Uhlalutyo lweendlela zeVibration
Ityala leziganeko ezininzi.
Siya kuhlala sizihlaziya ulwazi kuwe, ngoko uya kuba nekhosi eguqukayo apho unokufumana khona idatha eluncedo neluncedo.
Sebenzisa i-ANSYS Workbench ukunxibelelana nosapho lwe-ANSYS solves
Ukuqonda Ngokubanzi kwabaXhasi
Qonda iinkqubo zokwenza uvavanyo olukumileyo, olusebenzayo kunye nolwebushushu
Sebenzisa iiparamitha ukuvelisa iimeko ezahlukeneyo
Kuyacetyiswa ukuba nolwazi ngaphambi kokuhlaziywa kwezinto ezisemgangathweni kodwa akukho mfuneko yokuba nesidanga sobunjineli
Kuyacetyiswa ukuba inkqubo ifakwe kwikhompyuter yakho ukuze ukwazi ukulandela iiklasi ngeendlela zakho
Amava angaphambili kulawulo lweenkqubo kunye nokusingqongileyo kweCAD
Ulwazi lwangaphambi kwemithetho esisiseko yoyilo, ulwakhiwo kunye nobushushu
Iitekhnoloji zoomatshini kwindawo yoyilo
Iikhosi zeempendulo Iikhosi zoYilo zoMatshini
UDiego villanueva uthi:
Ndingayithatha njani le khosi… ???